अष्ट्रेलियाको जीवनशैलीबारे मेलबर्नमा कक्षा - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २८ माघ २०७३, शुक्रबार ०४:३८ |
मेलबर्न । कङ्गारुको देश अष्ट्रेलिया नेपालीहरुको पनि प्रमुख गन्तव्य बनेको छ । वर्षेनी १२ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि यहाँ आउने गर्दछन् । विजनेश लगायतका अन्य विभिन्न भिषामा आउनेको संख्या पनि निकै छ । विस्तारै अष्ट्रेलियाका प्रमुख राज्यहरुमा नेपाली समुदायको उपस्थिति बहुल बन्दै गएको छ ।
अष्ट्रेलियामा यसरी नेपालीहरु आकर्षित हुनुको प्रमुख कारण यहाँ उपलब्ध हुने अवसरहरु हुन् । तर कहिलेकाही सामान्य कुराहरुको राम्रो जानकारी नहुँदा यहाँ विभिन्न समस्या भोगेका नेपालीहरु पनि छन् । विशेष गरि काम र अवसर खोज्ने क्षेत्रमा नेपालीहरुले यस्ता समस्या वा चुनौति खेप्ने गरेका छन् । यहाँको जीवनशैलीबारे राम्रो जानकारी नहुँदा पनि अप्ठ्यारो हुने गरेको धेरैको अनुभव छ ।
यही कुरालाई ध्यानमा राखेर मेलबर्नमा अष्ट्रेलियामा कसरी सेटल हुने भन्नेबारेमा आवश्यक जानकारी र परामर्श दिने कार्यक्रमको आयोजना गरिदैछ ।
विएमयब्लु एडुकेशन मेलबर्न र रोमनज प्रि क्लासेसको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको इन्फर्मेशन सेसन अन सेटलिङ इन अष्ट्रेलिया अन्तर्गत अष्ट्रेलियामा रोजगारीको अवसर कसरी खोज्ने ? रिज्युम र सिभी कसरी तयार पार्ने ? लगायतका विषयमा आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै अष्ट्रेलियाको जीवनशैली अनुसार कसरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने र मेलबर्न शहरका आधारभूत नियमहरु बारे जानकारी समेत उपलब्ध गराइने आयोजकले जनाएको छ ।
कक्षा बेलुकी ४ बजेदेखि ५ः३० बजेसम्म जारी रहनेछ ।
Previousबिन्दास राष्ट्रपति ट्रम्पको एउटा अनौपचारिक तस्विर
Nextअमेरिकी ई डिभी चिठ्ठा कार्यक्रम बन्द गर्ने अमेरिकी संसदमा प्रस्ताव
अष्ट्रेलियामा सुदुर पश्चिमेलीहरुको होली !
१२ फाल्गुन २०७४, शनिबार १०:१७